ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - အသက်ရှုစက် Ventilator - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Myanmar / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - အသက်ရှုစက် Ventilator
ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - အသက်ရှုစက် Ventilator
Community, Coronavirus, Experience, Myanmar, Zaw Aung (Mon Ywa)
(မိိုးမခ) ဧပြီီ၁၄၊ ၂၀၂၀
Video laryngoscope လို့ခေါ်ကြတယ်။ ကိုဗစ် အသဲအသန် လူနာကျမှ သုံးရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က Test နဲ့ ကွာရန်တင်း ပဲ လုပ်နေချိန်ပါ။ လူနာများဖော်ထုတ် Contact Trace ဦးစားပေးနေချိန်ပါ။.. ဗဟုသုတ အဖြစ် အသက်ရှုစက်အကြောင်း ကြားသိရတာတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်။..မြန်မာပြည်မှာ လုံလောက်ပါတယ်။ Mask/ Test Quarantine တွေပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာရေးအသိရှိလာပြီး ကူးစက်နှုန်း ကျသွားရင် တရုပ်နိုင်ငံလို အမြန်ဆုံး အလုပ်ပြန်ဝင်နိုင်မှာပါ။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလမှာ အမေရိကန်၊ နဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံများက အသက်ရှုစက် အမြောက်အများ ဝယ်ယူကြပါတယ်။ လူနာတွေကို မေတ္တာစေတနာထားပြီး အသက်ရှုစက်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများ စီးပွား အရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသက်သက် ဒုက္ခရောက်ချိန်. အရည်သွေးမမှီတဲ့ နှခေါင်းစီး၊ သိုလှောင် ပြီး ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ရောင်းချ အမြတ်ထုတ်သူများလည်း အနည်းအကျဉ်း ရှိသလို၊ အသက်ရှုစက် ဈေးကွက်မှာလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလို ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါအချိန်မှာ မကူညီပဲ အမြတ်ထုတ်လိုသူများကို. မြန်မာခေါင်းဆောင်ကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှုတ်ချသလို ပြည်သူများလည်း ဖော်ထုတ် ပေးရပါမယ်။
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ICU ဌာနမှာCOVID-19 ရောဂါလူနာများ ရှိလာမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုဖို့ အသက်ရှူစက် (၂)လုံးသာ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံကြီး အပါအဝင် အခြားသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက စုပေါင်းပြီး သိန်းနှစ်ထောင်ဝန်းကျင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အသက်ရှူစက်(၁၁)လုံးနှင့် အခြားသောလိုအပ်တဲ့ ဆေးရုံသုံးစက်ကိရိယာများ ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (14/3/2020 news)
အသက်ရှုစက် ကလည်း ကွန်ပြူတာသုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း ဖြစ်လို့ ကွာလတီ နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Brand ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်း ၂၀ သိန်း မှ သိန်း၃၀ ရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများက ခွင့်ပြုချက် ကလည်း ပေါ်လစီပေါ် မူတည်ပါတယ်။. ကိုရိုနာလူနာသုံး ဈေးကွက်မှာ US$2000 ပတ်ဝန်းကျင် ဈေးရှိပါတယ်။
ပြည်မြို့ဆေးရုံမှာ အသက်ရှုစက်လှုဒါန်းဖို့ ကြိုးစားနေကြသူ မိတ်ဆွေများ ရှိလို ဝမ်းသာမိတယ်။ မြန်မာပြည်က အဂတိနဲ့လူလိမ်မျာပေါတယ်၊ အစိုးရက မိမိလှုဒါန်းပြီး အဆင့်မမှီလို့ မသုံးဘူး ဖြစ်ရင်လဲ ခက်ပါမယ်။ ကြိုးနီစနစ် Dr Aung Zaw effect (BPI ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး) လို့ ပုသိမ်မြို့ဆေးရုံအုပ် ဆရာဝန်ကြီး (ပင်းတယမီးအိမ်ရှင်) က ထုတ်ဖေါ်ပြောလို့ အစိုးရက ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘတ်ဂျတ်သုံးဖို့ (ယုံကြည်မှုနဲ့) Dr. Aung Zaw effect မရှိအောင် အစိုရဘတ်ဂျတ် နဲ့. ကိုဗစ်ဆေးပစ္စည်း ဝယ်ယူရေး မှာ ဖြေလျှော့ပေးကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့ရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ပါစေ.. ကိုဗစ် ဆေးဝါး.အထောက်ကူပစ္စည်း ဝယ်ယူရာမှာ.. ပြင်ပ ဝိသမ လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တချို့ ကူညီချင်တာပဲသိပြီး ဗဟုသုတနည်းတဲ့ စေတနာရှင်များ၊ အလှုရှင်များ ရှိကြပါတယ်။ အစိုးရ ကိုဗစ် ဗဟိုမှာ ဘယ်က ပစ္စည်း ဘယ်လိုဝယ်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်ရတဲ့ ပုဂလိက ပညာရှင် အကြံပေးများ ခန့်ထားရပါမယ်။ ဖုန်းနံပါတ် (Help Center ယုံကြည်မှု ရှိအောင် လုပ်ရပါမယ်)။
မေ့ဆေးဆရာဝန်မကြီးက သူအသည်းအသန် အသက်ရှုမရ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ချိန် အသက်ရှုစက်ပေါ် မတင်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ သတင်းကို သုံးသပ်ကြည့်တော့
... ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရဲ့တာဝန်ဟာ အသက်တချောင်းကို ရတဲ့နည်းနဲ့ကယ်တင်ရပါမယ်။
... အသက်ရှုစက်ပေါ် တင်ရင် လူနာရဲ့ပါးစပ်ကို ဟပေးပြီး တပ်ဆင်ရတော့ ကူးစက်ဖို့လမ်းများပါတယ်။
... မိမိကြောင့် အခြားသူတွေ ကူးစက်မခံရလိုစိတ် စေတနာမေတ္တာနဲ့ သူအသဲသန်ဖြစ်ရင် အသက်ရှုစက်မသုံးဖို့ လက်မှတ်ထိုးခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်မကြီး ကျန်းမာစွာ ပျောက်ကင်းပါစေ။
ကိုဗစ်ရောဂါ ရရှိ အပြင်းဖျားပြီး နောက်ဆုံး အသက်ရှုကြပ် မေ့မျောနေတဲ့ လူနာများဟာ အသက်ရွယ်ကြီးရင့်သူများပါတယ်။
video laryngoscope (အသက်ရှုစက်) အသုံးပြုဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုများ လုပ်နေကျရှိမှ ကြွမ်းကျင်ပါတယ်။ ..ကိုဗစ်ရောဂါက ကူးစက်အင်မတန် မြန်ဆန်တော့ အသက်ရှုစက်သုံးရင် သတိအရမ်းရှိရပါမယ်။ ဂူဂယ်ယူကျု များမှာ ဗီဒီယိုများ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Ventilator & COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic has led to shortages of essential goods and services - from hand sanitizers to masks to beds to ventilators. Several countries have already experiencedashortage of ventilators.
In 2006 (under President George W. Bush), the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) of the United States realized that the country was likely to have an epidemic of respiratory disease and would need more ventilators, so it awardeda$6 million contract to Newport Medical Instruments,asmall company in California, to make 40,000 ventilators for under $3,000 apiece. In 2011, Newport sent three prototypes to the Centers for Disease Control. In 2012, Covidien,a$12 billion/year medical device manufacturer, which manufactured more expensive competing ventilators, bought Newport for $100 million. Covidien delayed and in 2014 cancelled the contract.
BARDA started over again withanew company, Philips, and in July 2019, the FDA approved the Philips ventilator, and the government ordered 10,000 ventilators for delivery in mid-2020.
Fifty-four governments, including many in Europe and Asia, imposed restrictions on medical supply exports in response to the coronavirus pandemic.
အပြည့်အစုံ (English) ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်.နဲ့ ကုသရေးမြန်မာနိုင်ငံက လူနာနည်းပါး တော့ ကာကွယ်ရေးပဲ အထူး (အထူး) လုပ်နေရပါတယ်။ ကူးစက်မှု မကြာမီ လူနာများစွာ ပေါ်လာပါမယ်။ အသက်ရှုစက်က ကုသရေး အပိုင်းဖြစ်လို့ လောလောဆယ် အရေးမကြီးသေးပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားလို့ ရေးရပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးအတွက်... ကွာရန်တင်း ( or) လမ်း.ရပ်ကွက် လော့ဒေါင်း
... နှခေါင်းစီး အပြင်ထွက်တိုင်း တပ်ဖို့
... Test ပိုးတွေ့သူ ဖော်ထုတ်ဖို့ (Contact Temracing)
ရန်ကုန်မှာ အထူးသဖြင့် လက်လုပ်လက်စားများတဲ့ လှိုင်သာယာ လိုနေရာကို ကာကွယ်.ထောက်ပံ့ရေးတွေ ဦးစားပေးရပါမယ်။
ရန်ကုန်.လူ ၅သန်းလောက်ကျန်းမာရေး.အားနည်းတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာပဲ Test ပိုးတွေ့ အများအပြား ပေါ်လာနေပါပြီ။ ပိုးတွေ့ ၄၀ကျော်မှာ ရောဂါ လက္ခဏာမပြသူ (ကျန်းမာနေသူ) ၁၅ဦး (37%) ရှိနေပါတယ်။ ကျန်မာရေးပညာပေး (ဥပမာ. အဝတ်နှခေါင်းစည်း ဖြစ်စေ အပြင်ထွက်ရင် ဝတ်ဖို့) အမိန့် လိုပါတယ်။ ဖမ်းနိုင်.မဖမ်းနိုင် အရေးမကြီးပါ။ အခုမှ အမိန့်ထုတ်ဖို့ နှောင့်နှေးနေဆဲပါ။ တပ်မတော်သားတွေ လွှတ်တော်မှာ နှခေါင်းစီး တပ်ကြတာ ကို အခုချိန် ထောက်ခံမိပါတယ်။
စကားမစပ်(Help Center ဖုန်းနံပါတ် ပေါ်ပေါက်လာလို့ ကျေးဇူးတင်လှ ပါတယ်။ လူအင်အား များများ သုံးနိုင်ပါစေ။ .. လူတိုက်ရိုက်မကိုင်ပဲ. စက်ရုပ် အသံနဲ့ဖြေကြားတာ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်အားပေးလိုသူ အလွန်များပါတယ်။ မြို့တိုင်းမှာ ကိုဗစ်ဗဟို ကဲ့သို့ နံပါတ် (4 digits) ရှိရပါမယ်။ လှိုင်သာယာ အကြောင်း မေးမြန်းလိုရင် သိသမျှဖြေမယ်။ မိမိမသိရင် လှိုင်သာယာက လုပ်အားပေး ဖုန်းနံပါတ်ကို Transfer လုပ်ပေးမယ်။ အသက်ရှုစက် အကြောင်းသိလိုရင် ကြွမ်းကျင်သူနံပါတ်ကို လှမ်းခေါ်မယ်။ ကြွမ်းကျင်သူက ဖုန်းကိုင်ရင် ၂ယောက် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်။..အသက်ရှုကြပ်.သေလု လူနာအတွက် Help Center ကို မြစ်ကြီးနားက ဖုန်းဆက်ရင် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ အဲလို ဖြစ်ရပါမယ်။ Press 1 for ...Press2for.. အဲလ်ု နံပါတ်နှိပ်ခိုင်းနေရင်..ပြည်သူလူထု ဖုန်းဘီလ် ကုန်ပါတယ်)။
ကျန်မာရေး ခုခံအားကောင်းဖို့၊ ကံကြမ္မာလည်းကောင်းကြဖို့ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။
ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - အသက်ရှုစက် Ventilator Reviewed by MoeMaKa on 2:00 PM Rating: 5